स्तनपान गराउनाले क्यान्सरको जोखिम घट्छ त ? ~ नेपाली समाचार | Latest News from Kathmandu, Nepal
हामी जति नै व्यस्त भए पनि स्वास्थप्रति खेलबाड गर्न सक्दैनौं । यद्यपि, व्यस्तताका कारण हामी स्वास्थप्रति सचेत हुन भने सकिरहेका हुँदैनौं । त्यसैले त हामी स्वास्थमा कुनै समस्या आएपछि मात्र डाक्टरलाई भेट्छौं । हामीले पछिल्लो पटक अपनाएका जीवन शैलीले भने हाम्रो स्वास्थ दिनप्रति दिन बिग्रदै जाने सम्भावना अत्यधिक छ ।
आजको हाम्रो व्यस्त जीवन शैली, खानपान तथा व्यायामको कमीका कारण स्वस्थ सम्बन्धि धेरै समस्याहरु देखिन थालेको छ । जसमध्ये क्यान्सर अहिले अधिकांश व्यक्तिमा देखिने रोगको रुपमा उदाएको छ ।
विकसित मुलुकदेखि विकासशील मुलुकका व्यक्तिहरु अहिले क्यान्सरबाट पीडित भैरहेको सुनिन्छ । क्यान्सर संसारमा मृत्युको सबैभन्दा महत्वपुर्ण कारण समेत बन्न थालेको छ । क्यान्सर महिला तथा पुरुष दुवैलाई हुनसक्छ । महिलाहरुलाई प्रायः स्तन र पाठेघरको क्यान्सर हुने गरेको पाइन्छ । आफ्ना सन्तानहरुलाई स्तनपान गराउने महिलाहरुमा स्तन क्यान्सरको सम्भावना कम हुन्छ भन्ने आम धारणा छ । के स्तनपान गराउने महिलालाई साँच्चै नै स्तन क्यान्सर हुँदैन त ?
वास्तवमा स्तनपान गराउने महिलाहरुको स्तनपान गराउने क्रममा स्तनबाट धेरै कोशिकाहरु नष्ट हुने गर्छन्, जसमा क्यान्सरसंग सम्बन्धि कोशिकाहरु पनि नष्ट हुन्छन् । स्तनपान गराउनाले स्तनमा जिनहरु सक्रिय हुन्छन्, जसले क्यान्सरको सम्भावित खतराबाट बचाउँछ ।
अनुसन्धानकर्ताका अनुसार जुन महिलाले ६ महिनासम्म स्तनपान गराउँछन्, ती महिलाको तुलनामा स्तनपान नगराउने महिलालाई क्यान्सर हुने सम्भावना २ प्रतिशत बढि हुन्छ । आर्काइभ अफ इन्टर्नल मेडिसिन २००९ मा प्रकाशित एउटा अनुन्धान रिर्पोटका अनुसार त्यस्ता महिलाहरु, जसको परिवारमा स्तन क्यान्सरको इतिहास छ, तिनीहरुलाई स्तनपान गराउनाले महिनावारी रोकिनुभन्दा अघि स्तन क्यान्सर हुने खतरा ६० प्रतिशतले कम हुने गर्दछ । जर्नल अफ द नेशनल क्यान्सर इन्स्िटच्यूट २०१४ मा पनि स्तनपान तथा क्यान्सरका बीचको सम्बन्धका बारेमा चर्चा गरिएको थियो ।
अक्टूबर २०१५ मा एनल्स अफ एंकोलोजीमा प्रकाशित करिव ३७ हजार स्तन क्यान्सरको एक एकत्रित अध्ययनमा के पाइएको थियो भने जो महिलाहरु स्तनपान गराउँछन्, तिनीहरुमा स्तन क्यान्सरको हार्मोन रिसेप्टर नेगेटिभ हुन्छ र उनीहरुमा यो क्यान्सर विकसित हुने खतरा पनि २० प्रतिशतसम्मले कम हुन्छ ।
स्तनपानले तौल पनि घटाउँछ
स्तनपान आमाहरुको स्वास्थ्यका लागि निकै फाइदाजनक मानिन्छ, यसले उनीहरुलाई स्वस्थ बनाउँछ, किनभने यसले पाठेघर तथा स्तन क्यान्सरको जोखिमबाट सुरक्षा प्रदान गर्दछ ।
स्तनपानका क्रममा ठूलो मात्रामा स्रावित हुने अक्सिटोसिन हार्मोनले सुत्केरी भएपछि महिलालाई सामान्य अवस्थामा फर्किन समेत सहयोग पुर्‍याउँछ । अर्थात, यसले पाठेघरलाई सामान्य अवस्थामा ल्याउन निकै सहयोग गर्छ । स्तनपान गराउनाले आमाहरुको शरीरबाट ठूलो मात्रामा क्यालोरी खर्च हुन्छ, जसको कारण गर्भवती भएको बेला बढेको तौल सजिलै घटाउन सहयोग पुग्छ ।
त्यसैले हामीले प्रायः के देखिरहेका हुन्छौं भने स्तनपान गराउने आमाहरुको वजन निकै चाँडो घटिरहेको हुन्छ । स्तनपान गराउनेले मानसिक तथा भावनात्मक रुपले समेत आनन्द आउँछ, जसले नयाँ आमाहरु सुत्केरी भइसकेपछि हुने डिप्रेसनको शिकार हुनबाट जोगिन्छिन् । यसबाहेक स्तनपान गराउने महिालहरुमा अस्टियोपोरासिस हुने खतरा पनि निकै कम हुन्छ ।